Muxuu ku jawaabay Eden Hazard kaddib markii wax laga weydiiyay xiddigaha Pogba iyo Mbappé?? – Gool FM
Muxuu ku jawaabay Eden Hazard kaddib markii wax laga weydiiyay xiddigaha Pogba iyo Mbappé??
Dajiye June 14, 2019
(Madrid) 14 June 2019. Eden Hazard ayaa shir jaraa’id rasmi ah uu xalay kaga soo muuqday howlka shirirka ee garoonka Santiago Bernabeu kaasoo ay kasoo qeyb galeen warbaahinta qeybaheeda kala duwan, wuxuu ku sheegay in Pogba iyo Kylian Mbappé ay ka mid yihiin xiddigaha ugu fiican addunka.
Real Madrid ayaa xalay si rasmi ah ugu soo bandhigtay laacibkeeda cusub ee Eden Hazard garoonka Santiago Bernabeu warbaahinta iyo jamaahiirta, iyadoo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha kooxda Florentino Perez.
Hazard oo ka hadlay dhowr arimood ee quseeya imaatinkiisa kooxda Real Madrid ayaa wuxuu yiri:
“Sidii aan horey u sheegay, waxaan ku riyooday daqiiqadahan tan iyo markii aan ahaa ilmo, imaatinkeyga kooxda Real Madrid iyo inaan xirto maaliyadan waxay ii tahay sharaf iyo talaabo weyn ee aan qaaday, waxaan sugayaa bilowga xilli ciyaareedka”.
“Zidane wuxuu ii yahay ku dayasho ka ciyaaryahan ahaan, joogitaankiisa kooxda isagoo macalin ah waxay fududeeneysaa waxyaabo badan laakiin waxaan doonayay inaan halkaan imaado wakhti dheer”.
“Wax shaqo ah kuma lihi saxiixyada la sameenayo, balse Pogba iyo Mbappé waxay ka mid yihiin ciyaartoyda ugu fiican adduunka, waan arki doonaa waxa dhaca dhamaadka suuqa kala iibsiga ee xagaaga”.
Ugu dambeyn Eden Hazard ayaa wax laga weydiiyay arigtidiisa kaga aadan in Ramos uu tuuro rigoorayaasha lagu abaal mariyo kooxda Real Madrid wuxuuna ku jawaab celiyay/
“Waxaan ahay ciyaaryahan cusub, Ramos waa kabtanka kooxda, qaabka uu u tuuro rigoorada waa si qurux badan”.
Shabakada “Sky Sports” oo xaqiijisay in Juventus ay soo afjartay heshiiska Sarri & xiliga sida rasmiga ah loo shaacin doono